बंगलादेशमा बलात्कारको मुद्दामा पाँच जनालाई मृत्युदण्डको फैसला « Sajhapath.com
बंगलादेशमा बलात्कारको मुद्दामा पाँच जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
एजेन्सी असोज २९ ।
बंगलादेशको अदालतले बिहीबार सन् २०१२ मा भएको एक सामूहिक बलात्कारको घटनामा पाँच जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
बंगलादेशमा बलात्कारको र लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको समयमा अदालतले १५ वर्षीया बालिकामाथि भएको सामूहिक कलात्कारका दोषीहरुलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीका अनुसार महिला तथा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना सुल्झाउन गठित विशेष अदालतले बिहीबार उत्तरी जिल्ला टाङ्गिलबाइमा यो फैसला सुनाएको हो ।
अभियोजनकर्ता नसिम अहमदका अनुसार पीडित बालिकाको केटा साथीले उनलाई खोला नजिकैको क्षेत्रमा लिएर गएका थिए । जहाँ पीडितको साथी र अरु दुई जनाले बलात्कार गरेका थिए । यो घटनामा अन्य दुई जना युवकले पनि सघाएका थिए ।
यो घटनामा पाँचै जनालाई अदालतले दोषी रहेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । बंगलदेशमा बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएपछिको यो पहिलो फैसला हो । गत साता बंगलादेशमा एक सामूहिक बलात्कारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै बंगलादेशभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनले ठूलो रुप लिएपछि सरकारले बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेको थियो ।
बैंकका ३५ सय बढी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुँदा सेवा प्रभावित
काठमाडौं, कार्तिक ५। पछिल्लो दिन यता कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था कोभिड–१९
जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं कात्तिक ४ नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले पार्टी एकता भएको ६ महिनापछि सांगठनिक
अफगानिस्तानमा बम विष्फोट, १२ प्रहरीको मृत्यु
एजेन्सी कात्तिक ४ । अफगानिस्तानको निमरोज प्रान्तको कांग जिल्लामा मंगलवार दुई ठूला बिस्फोट भएका छन्
काठमाडौं कात्तिक ४ । रानीपोखरीको भोलि बुधबार उद्घाटन हुने भएको छ । पोखरी र पोखरीबीचको
कर्णालीको विवादबारे ओली र प्रचण्डको छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ती
सांसद हितबहादुर तामाङको दसैं भत्ता फिर्ता, जनस्वास्थ्यका काममा खर्चन सरकारलाई अनुरोध
उपसभामुख तामाङद्वारा प्रदेश पूर्वाधार विकासका योजना स्वीकृत [कहाँ कति परे बजेट ?]
विष्णु गैरेको गीत ‘आउँछु भन्थें’ सार्वजनिक
संकटकालको हल्ला निराधार - गृह मन्त्रालय